Free Thinker: လုပ်ငန်းခွင် မတော်တဆမှုများ (၁)
ယခု ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကား အလုပ်ခွင်မတော်တဆမှု အတော်ဖြစ်သောနှစ် ဖြစ်၏။ မနှစ်ကလည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် သည်နှစ်လောက်မများပါ။ ထိုအခါ ထို လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆမှုများအတွက် အဓိကတာဝန်ရှိသော MOM (Ministry of Manpower) မှာ ခေါင်းခြောက်ရတော့သည်။ ဟိုသင်းကြပ်လိုက်၊ သည်သင်းကြပ်လိုက်၊ ပရောဂျက်တွေ လိုက်စစ်ဆေးလိုက် နှင့် အတော် အလုပ်ရှုပ်လေ၏။ ထို့အတွက် သူတို့နှင့်တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေသော ကျွန်ုပ်တို့မှာလည်း မောင်မင်းကြီးသားများ အချိန်မရွေး ပေါက်ချလာနိုင်သောကြောင့် ၂၄ နာရီ တပ်လှန့်ထားရ၏။
၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ၊ MOM ၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်၌ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်တွင် လုပ်ငန်းခွင် မတော်တဆမှုကြောင့် သေဆုံးမှု ၂၅ မှု ရှိပြီး ယမန်နှစ် ဤအချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက တစ်မှုလျော့နည်းသည်၊ အငယ်စား မတော် တဆမှုများမှာ ၅၀၂၉ မှုရှိပြီး ယမန်နှစ်ကဖြစ်ခဲ့သော အမှုပေါင်း ၅၁၆၀ ထက်ပိုလျော့သွားသည်၊ သို့သော် အပြင်းစား မတော် တဆမှုများမှာမူ ၂၅၇ မှုရှိပြီး ယမန်နှစ်ကဖြစ်ခဲ့သော အမှုပေါင်း ၂၅၅ မှုထက် အနည်းငယ်ပိုလာသည် ဟု ဖော်ပြခဲ့၏။
မတော်တဆမှုဆိုသည်မှာ မဖြစ်မီက ကြိုတင်ကာကွယ်ရတာဖြစ်သည်။ ဖြစ်ပြီးမှဆို ဘာလုပ်လို့ရပါမည်နည်း။ သို့သော် လူ့သဘာဝအရ ဟာကွာ၊ ငါဒီလိုလုပ်လာတာ ဟောသည်မှာကြည့်၊ အံတိုနေပြီ။ ဘာမှမဖြစ်လို့ မင်းမျက်စိရှေ့မှာ အကောင်းသား အမွန်သားကြီးရှိနေတာမဟုတ်လားကွ ဟု ခေါင်းမာသည်။ ပြောစကား၊ ဆိုစကား နားမထောင်။ ဖြစ်တော့မှ အမယ်လေး၊ ဘလေးနှင့်။
Occupational Safety (လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆမှု) ဟူသည် အသက် သို့မဟုတ် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေသောအရာ ဖြစ်၏။ အချို့က safety ဆိုလျှင် နှာခေါင်းရှုံ့ချင်ကြသေးသည်။ ရှုံ့ပါ၊ ရှုံ့ပါ။ ပြုတ်ကျ သေတော့မှ မျက်ရည်လေး စမ်းစမ်း၊ စမ်းစမ်းမလုပ်ပါနှင့်။
ယခု ကျွန်တော် စုဆောင်းရသမျှ သတင်းပလင်း အချက်အလက်များကို အခြေခံကာ လက်တွေ့မှရသော ဗဟုသုတ များဖြင့် သည်မတော်တဆမှုများ အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရသည်၊ မည်ကဲ့သို့ကာကွယ်နိုင်သည် စသည်တို့ကို ဝေဖန်သုံးသပ် တင်ပြပါမည်။ ဤကိစ္စကို ပိုပြီးအသေးစိတ်သွားလျှင် Case study ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် case study လုပ်ရန် ငွေလိုသည်၊ လူအင်အားလိုသည်၊ အချိန်လိုသည်၊ နည်းပညာလိုသည်။ ယခု ကျွန်တော်ပြောပြမည်မှာ သည် မတော်တဆမှုများဖြစ်ရတာ ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်၊ ဘယ်လို အကာအကွယ်အတားအဆီးများလုပ်လျှင် သည်ကဲ့သို့ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်မည် စသည်တို့ကို ကျွန်ုပ် ဉာဏ်မီသလောက် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်သတည်း။
၂။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင်ဖြစ်ခဲ့သော မတော်တဆမှုများ
၁။ Fatal accident at Novena Ville
ဇွန်လ ၆ ရက်၊ ၂၀၁၃ ရက်နေ့က Novena Ville ရှိ လေးထပ်အဆောက်အအုံတစ်ခုကို ဖြိုဖျက်နေစဉ် မြေတူးစက် (excavator) ပြိုကျ၍ စက်မောင်းသူ သေဆုံးခဲ့သည်။ သေဆုံးသူမှာ အသက် ၅၀ ကျော် စင်ကာပူနိုင်ငံသား တရုတ် ဖြစ်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရသည်ကို သတင်းများတွင် အတိအကျဖော်ပြမထားပါ။
ပုံကိုကြည့်၍ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်ကို ခန့်မှန်းရလျှင် ကျောက်ခွဲစက်သည် အဆောက်အဦကို ဖြိုဖျက်ရန် မြေအောက်ခန်း အပေါ်၌နေကာ ကွန်ကရိခွဲနေစဉ် ကြမ်းပြင်ကျွံကျခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ (ဤကျောက်ခွဲစက်မှာ မြေတူးစက်မှ မြေကော်သည့်ခွက် ကို ဖြုတ်ကာ ကျောက်ထိုးခွဲသည့် တူတပ်ထားခြင်းဖြစ်၏။) သို့မဟုတ် ကျောက်ခွဲစက်မဟုတ်ဘဲ ခွဲပြီးသားကျောက်တုံးများကို ရှင်းထုတ်နေသည့် မြေကော်စက်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အနီး၌ ကျောက်စထည့်သည့် ဇလားကြီးတွေ့ရသဖြင့် ကျောက်မှုန်များ ကို ရှင်းနေတာ ဖြစ်ပါမည်။ ကျောက်ခွဲစဉ်ကဒဏ်ကြောင့် ပြိုလုနီးနီးဖြစ်နေသော ကြမ်းခင်းမှာ မြေတူးစက် အလေးချိန်ကို မခံနိုင်ပဲ ကျွံကျတာဖြစ်မည်။
အဆောက်အဦတစ်ခုကို ဖြိုဖျက်ရာတွင် ကွန်ကရိနံရံ၊ ကြမ်းခင်း၊ ယက်မ စသည်တို့ကိုခွဲရန် ကျောက်ခွဲစက် သုံးရ သည်။ အလွန်မာလှသော ကွန်ကရိနံရံကို စက်တူဖြင့် အသားကုန်ထိုးခွဲရတာ ဖြစ်သည့်အတွက် ကျောက်ခွဲခြင်းသည် အလွန်ဆူညံလှသလို တုန်ခါမှုလည်း အလွန်များ၏။ ထိုတုန်ခါမှုကြောင့် လက်ရှိအဆောက်အအုံ၏ တည်ရှိမှုအနေအထား ပျက်ပြားသွားနိုင်သလို အနီးပတ်ဝတ်ဝန်းကျင်မှ အဆောက်အအုံများကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အခြေအနေကို လိုက်၍ အဆောက်အဦတစ်ခု ဖြိုဖျက်တော့မည်ဆိုလျှင် ထိုဖြိုဖျက်ခြင်းကြောင့် အဆောက်အဦများအပေါ် မည်ကဲ့သို့ အကျိုး သက်ရောက်နိုင်သည်ကို တွက်ချက်အတည်ပြုပေးရသည်။ လိုအပ်လျှင် ထောက်များဖြင့် ကျားကန်ပေးရမည်။
ယမန်နှစ်က အပေါ်ထပ်တွင် ကျောက်ခွဲစက်ဖြင့် ခွဲနေစဉ် ကြမ်းပြင်များ အဆင့်ဆင့် ပြိုကျကာ ကျောက်ခွဲစက်ကြီး တစ်ခုလုံး မြေညီထပ်ထိ ရောက်ခဲ့ဖူးပြီ။ ထို့ကြောင့် အထပ်မြင့်တိုက်များ၌ အပေါ်လွှာများကို ဖြိုဖျက်လျှင် အောက်လွှာများ၌ ထောက်များ (prop) ထောက်ပေးရသည်။ ထောက်အရွယ်၊ မည်သည့်နေရာများ၌ မည်မျှများများထောက်ရမည် စသည်တို့ကို PE (Professional Engineer) က တွက်ချက်ပေးသည်။
ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့သည့် ပြီးခဲ့သောပရောဂျက်က ယခင်ရှိပြီးသား အဆောက်အဦဟောင်း (Kallang Bahru Complex) ကို ပြင်ကာ၊ ဖြည့်ကာ (A&A work – Alteration and Additional) အသစ်ပြန်ဆောက်ခြင်း (CT Hub) ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ လက်ရှိ ၉ ထပ်အဆောက်အဦမှ ကြမ်းခင်းများ၊ ယက်မများ (beams)၊ တိုင်များ (columns) ကို ခွဲစိတ်၊ ဖြိုဖျက်ရသော အလုပ်များစွာပါသည်။ ထို့အတွက် ဖြိုဖျက်ခြင်း (demolition) ကန်ထရိုက်တာမှာ Aik Sun ဖြစ်၏။
သူတို့က ၀ါရင့်၊ သမ္ဘာရင့် အဖျက်သမားများ ဖြစ်၏။ အချို့မှလွဲ၍ အားလုံးလိုလိုမှာ အဖိုးကြီးများချည်း ဖြစ်၏။ ကိုယ့် အလုပ်ကိုကိုယ် အားထည့်ကာ စိတ်ပါလက်ပါ လုပ်ကြသူများ ဖြစ်သည်။ သို့သော် လုပ်သက် ဆယ်နှစ်အထက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သဖြင့် ခေါင်းမာသည်။ အထက်တွင် ပြောခဲ့သလို ဟေ့ကောင်၊ ငါတို့ဖျက်လာတာ အံခွနေပြီ ဆိုသော အတန်းအစားထဲမှ ဖြစ်၏။
ဆိုတော့ အောက်တွင်ထောက်ရမည့် ထောက်များကို ပီအီးဒီဇိုင်း၌ ပြထားသလို အပြည့်မထောက်၊ ကြားထဲမှ တိုင်များကို ဖျောက်ထားသည်။ သို့သော် သူတို့က ကိုယ့်အဖေလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ သဟောက်သဟာ မလုပ်ချင်သဖြင့် အနုနည်းနှင့် စည်းရုံးရ၏။ ဒီနေရာလေးတော့ ထောက်ပါကွာ၊ ဒီတည့်တည့်မှာ ကျောက်ခွဲစက်ရပ်မှာမို့ အင်မတန် အန္တရာယ်များတယ်။ ဖြစ်လိုက်ရင် မသက်သာဘူး ဆိုတော့ သူတို့ကလည်း လုပ်ပေးပါသည်။ သို့သော် ဖြတ်လမ်းနှင့် ဖြစ်၏။ နေရာတိုင်း ထောက်များထောက်မည့်အစား သစ်သားတန်းခံကာ သုံးနေရာလောက်မှ ထောက်သည်။ မရှိတာထက်စာလျှင် တော်သေးတာပေါ့ဟု အသာကြည့်နေရ၏။
မတော်တဆမှုဟူသည် လူများအရဲကိုးသဖြင့် ဖြစ်သည်။
ထိုအထဲတွင် မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်လည်း ပါပါလိမ့်မည်။ မည်သို့ပါသနည်း။
မိတ်ဆွေ မီးနီခါနီး လမ်းကို အတင်းဖြတ်ပြေးဖူးပါသလား။ (ဟာ၊ ပြေးတာပေါ့၊ ဘာရမလဲ၊ နေ့တိုင်းလိုကို ပြေးတာ။)
ရထားတံခါးပိတ်ခါနီး အတင်းပြေးတက်ဖူးပါသလား။ (ဟီဟိ၊ မကြာခဏတက်ဖူးတယ်၊ စီးတီးဟော MRT မှာ)
ဤမီးပွိုင့်ကို ခဏစောင့်လိုက်လျှင် အချိန်မည်မျှပိုကုန်သွားမည်ကြောင့် အတင်းဖြတ်ပြေးရတာပါနည်း။ ဤကဲ့သို့ အတင်းရော၊ အဓမ္မပါ ဖြတ်ပြေးရလောက်အောင် အဘယ်သေလောင်းပျောက်ဝ အရေးတကြီးကိစ္စများ ရှိနေပါသနည်း။
ဘာအရေးတကြီးကိစ္စမှ မရှိပါ။ ဖြတ်ပြေးချင်လို့ ပြေးတာသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ လူ့သဘာဝဖြစ်၏။
ထို့ကြောင့် လူဟူသည် ဖြစ်ခါမှဖြစ်ကရော၊ အရဲစွန့်ကြသည်ချည်း (risk) ဖြစ်၏။
အရဲစွန့်သည့်အတွက် accident ဖြစ်ရသည်။
ထို့ကြောင့် accident မဖြစ်ရန် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းမှာ don’t take the risk. အရဲမကိုးပါနှင့်။ Safe Work Procedure တွင်ဖော်ပြထားသည်တို့ကို ဦးစွာ ပံ့ပိုးပေးပါ။ နောက်ပြီးမှ အလုပ်လုပ်ပါ။
၂။ ၂ သြဂုတ်လ၊ ၂၀၁၃
ဤသတင်းမှာ WSH Council, Safety Bulletin မှ ဖြစ်၏။ မည်သည့်နေရာတွင် မည်သူ၊ မည်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဆိုခြင်း ကို တိတိကျကျဖော်ပြမထားပါ။ ဆောက်လုပ်ဆဲ ၆ ထပ်တွင် ကော်လံကို ကွန်ကရိလောင်းရာ ယိုသဖြင့် တက်ပြင်ရာမှ ပြုတ်ကျသေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၌ လူအသေအပျောက်အများဆုံးမှာ အမြင့်မှပြုတ်ကျခြင်းဖြစ်၏။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ ယခု ကွန်ကရစ်လောင်းနေသော တိုင်သည် အဆောက်အဦအပြင်ဘက်ဆုံးမှ တိုင်ဖြစ်မည်။ တိုင်ကို ကွန်ကရိလောင်းရန် ကော်လံ ဖောင်ဝပ် ဆင်ရသည်။ ထိုကော်လံဖောင်ဝပ်ဆင်ရာတွင်လည်း သည်အတိုင်း တက်ဆင်ကြသည်။ သိပ်မမြင့်တော့ ဘယ်သူမှ ဂရုမထား။ အဆောက်အဦအတွင်းပိုင်း၌ရှိသော တိုင်များဆိုလျှင် အကြောင်းမဟုတ်။ မတော် ပြုတ်ကျတောင် ကြမ်းပြင်ပေါ် ကျမည်။ သို့သော် အဆောက်အဦအစွန်း၌ရှိသော တိုင်များဆိုလျှင်တော့ အလွန်သတိထားရန် လိုသည်။ ကျလျှင် ကြမ်းပေါ် ကျဘို့ထက် ဟို့ မြေပြင်ပေါ် တိုက်ရိုက်ပြုတ်ကျဘို့ များသည်။ ဤသို့ပြုတ်ကျသည်ဆိုလျှင်တော့ သေဘို့ကလွဲပြီး အခြားလမ်း မမြင်။
သည်တော့ အပေါ်တက်ပြီဆိုကတည်းက အသက်ကယ် ကိုယ်သိုင်းကြိုး (Full body harness) ၀တ်ဆင်ထားရန် လို၏။ ကိုယ်သိုင်းကြိုးမှ ချိတ်ကို ဖောင်ဝပ်တွင်ချိတ်ထားလျှင် ပြုတ်ကျသည့်အခါ ထိုကိုယ်သိုင်းကြိုးက သင့်အသက်ကို ကယ်လိမ့်မည်။
ယခု ကျသေသည့်အလုပ်သမားမှာ ကွန်ကရိလောင်းနေချိန်ဆိုတော့ ကိုယ်သိုင်းကြိုး ၀တ်မထား။ ထို့ကြောင့် ကော်လံဖောင်ဝပ် ယိုသည်ဆိုတော့ သည်အတိုင်း တက်ပြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်သိုင်းကြိုးယူဘို့ ၆ ထပ်ကနေ အောက်ပြန် မဆင်းချင်တော့။ ကွန်ကရိလောင်းနေတာဆိုတော့ ဖောင်ဝပ်ကို ရေစိုချင်စိုနေပါမည်။ ရေစိုတော့ ချောမည်။ ဖိနပ်ကလည်း ရေစို၊ ဖောင်ဝပ်ကလည်း ချောဆိုတော့ ပြုတ်ကျမည်။ ကိုယ်သိုင်းကြိုးဝတ်မထားတော့ အောက်ကို တိုက်ရိုက်ကျသည်။ ၆ ထပ်ကနေပြုတ်ကျတာ မသေဘဲ ခံနိုင်ရိုးလား။
သည်လိုလုပ်တာ အဲသည်တစ်နေရာတည်းမဟုတ်ပါ။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှန်သမျှ သည်အတိုင်းချည်း မှတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဆိုဒ်မှာရော တဲ့။ သိပ်ရှိသပေါ့ဗျာ။ ရှိလိုက်သမှ ရှိရှိ၊ ရှိရှိနဲ့တောင် မြည်နေသေး။ အောက်မှာ ကျွန်တော် ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ မြေညီထပ်ကနေ zoom ဆွဲရိုက်ထားတာဆိုတော့ ၀ါးနေသည်။
Safety harness ၀တ်ထားတာ တွေ့ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ချိတ် ချိတ်မထား။ အောက်တည့်တည့်ကသွားပြီး အယုတ္တ၊ အနတ္တတွေနှင့် ကိုင်တုပ်လိုက်မှ ချိတ်သည်။ ပြုတ်မကျလို့ပေကပဲ။ အဲသည် ၃ ထပ်ကသာ ပြုတ်ကျလို့ကတော့ စိနတိုင်းပြည် ကို လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်စရာမလိုဘဲ ပြန်ရောက်သွားလိမ့်မည်။
လက်ကို ဒါးခုတ်မိလျှင် လက်ပြတ်ရုံသာရှိမည်။ မျက်မှန်မတပ်လို့ မျက်လုံးထဲသံစ၀င်လျှင် မသကာ မျက်စိကန်းရုံ ရှိမည်။ သို့သော် အမြင့်မှပြုတ်ကျသည်ဆိုလျှင်တော့ နိမ့်နိမ့်လေးကပြုတ်ကျလျှင်ပင် အကျမတော် သေတတ်သည်။ မနှစ်က ဓာတ်တိုင်မှ မီးသီးတက်လဲသော အလုပ်သမားတစ်ယောက် ၂.၆ မီတာအမြင့်ရှိသော လှေခါးပေါ်မှ ပြုတ်ကျသည်။ ၂.၆ မီတာ ဆိုသည်မှာ လူကြီးလက်ခုပ်တစ်ဖောင်စာ သာသာလောက်ပဲ ရှိသည်။ ဘာမှ မြင့်တာမဟုတ်။ သို့သော် လှေခါးလဲကျတော့ ခေါင်းနှင့် ကွန်ကိတုံးနှင့်ဆောင့်မိကာ သေလုမျောပါးဖြစ်သည်။
ချစ်စရာကောင်းသော သူဌေးက ကောင်လေးကို လမ်းဘေး ပစ်ထားလိုက်သည်။ နောက်တော့ သေသွားသည်။ သူဌေးလည်း အဖမ်းခံရ၏။
၃။ ၂၂ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၃
၂၂ စက်တာဘာ၊ ၂၀၁၃ နေ့က Caldecott MRT interchange တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင်အတွက် တောရှင်း ရင်း သစ်ပင်ကို မြေတူးစက်နှင့် လှဲရာ မြေတူးစက်ပေါ်သစ်ပင်ပိ၍ အသက် ၃၆ နှစ်ရှိ ဂူနေ့စ်ကာရန်ဆိုသူ အိန္ဒိယ အလုပ် သမားကလေး သေဆုံးခဲ့ရသည်။ သစ်ပင်ပိ၍ စက်မောင်းခန်းအတွင်း ပိညပ်နေသော ခန္ဓာကိုယ်ကို ၂ နာရီကြာအောင် ထုတ် ယူခဲ့ရသည်။
သစ်ပင်မှာ Caldecott MRT အနီး သော်မဆင်လမ်းဘေး၌ ရှိပြီး ၁၀ မီတာမြင့်၍ လုံးပတ် ၁.၅ မီတာရှိ၏။ သေဆုံးသူ သည် အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ၃ ဦးနှင့်အတူ ထိုသစ်ပင်ကိုလှဲရန် အောက်ခြေတစ်ဝိုက်ရှိ မြေများကို တူးဆွနေစဉ် အမြစ်ကျွတ်၍ ၎င်းအပေါ်လဲကျခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားသုံးဦးမှာ ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြေးနိုင်ခဲ့သော်လည်း စက်မောင်းခန်းအတွင်း ရှိနေသူ ၎င်းမှာ မပြေးနိုင်ဘဲ သစ်ပင်ပိခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။
ဂူနေ့စ်ကာရန်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ တမီနာဒူးမှဖြစ်ပြီး သေဆုံးချိန်တွင် ဇနီးနှင့် သမီးနှစ်ယောက်ကျန်ခဲ့သည်။
သစ်ပင်လှဲရာတွင် အပေါ်ပိုင်းမှ အကိုင်းငယ်များကို ဦးစွာချိုင်၊ ထို့နောက်မှ အကိုင်းကြီးများကို ချိုင်၊ နောက်ဆုံးကျမှ တစ်ပင်လုံးလှဲဟု အဆင့်ဆင့် လုပ်ရမည်မဟုတ်ပါလား။ အခု ခပ်လွယ်လွယ် တစ်ပင်လုံးလှဲချလိုက်တော့ လူပါလဲရော မဟုတ်လား။ (သစ်ပင်စောင့် ရုက္ခစိုးက သောက်မြင်ကပ်လို့ ဖနောင့်နဲ့ပေါက်လိုက်တာ နေမှာပေါ့ဗျာ နော။)
၄။ Silversea Condo fatal accident
ကျွန်တော် safety officer အလုပ်စ၀င်တော့ ဘာ ဆောက်လုပ်ရေးအတွေ့အကြုံမှရှိတာမဟုတ်။ ထို့အတူ safety ဆိုတာကိုလည်း ယခင်က တင်းပြည့်ကြပ်ပြည့် တစ်ခါမှ မလုပ်စဖူး။ ECC project တုံးက ကိုယ့်ဆီရောက်လာသည့် safety coordination များ သောက်သုံးမကျ၍ ရှိသမျှ စာရွက်စာတမ်းများ အကုန်လုပ်ခဲ့ရသဖြင့် paper work ပြင်တာတော့ သေသေချာချာ ရင်းရင်းနှီးနှီးသိသည်။ သို့သော် လက်တွေ့လုပ်တာကတော့ ခုမှ နဖူးတွေ့၊ ဒူးတွေ့ တွေ့ရခြင်း ဖြစ်၏။ ဆိုတော့ အစစ အကုန်လေ့လာ သင်ယူနေရသည်။
သည်တော့ ECC project တွင် လုပ်ခဲ့စဉ်က ကျွန်တော်တို့ Grootint ကုမ္ပဏီတွင် အတူလုပ်ခဲ့ဖူးသော safety officer ဖြစ်သူ Terence တို့ ဆိုဒ်ကို သွားလေ့လာသည်။ သူတို့ဆိုဒ်က မရင်းပရိဒ်ရှိ Silversea Condo ဆောက်လုပ်ရေး ဖြစ်သည်။ သည်တုံးကတော့ နောက်တစ်နှစ်လောက်ကြာရင် သည်တိုက်ပေါ်က တစ်ယောက်ယောက် ပြုတ်ကျသေမယ် ဆိုတာ မသိခဲ့။
အထက်ပါဓာတ်ပုံရှိ အစိမ်းနုရောင်ရဲနှစ်ဦး၏ ဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံး၊ ခမောက်အပြာဆောင်းကာ လက်ညှိုးထိုးပြနေသူ မှာ ကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဆွေကြီး Terence ဖြစ်၏။
၂၆ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၃ နေ့၌ ဘန်းဂလားကုလားလေးမှာ အဆောက်အဦပြင်ပမှနေ၍ ပြူတင်းပေါက်တပ်ဆင်သော အလုပ်ကိုလုပ်နေစဉ် အထပ် ၂၀ အမြင့်မှ ပြုတ်ကျသေခဲ့သည်။ သူတို့ကတော့ ငြမ်းစင်ပြိုကျခြင်းဖြစ်သည် ဆို၏။
သို့သော် ပုံထဲ၌ မည်သည့် ငြမ်းစင်မှ မတွေ့မိပါ။ မည်သို့ဖြစ်ရသည်ကို ကျွန်တော် သေသေချာချာမသိပါ။
အဆောက်အဦပြင်ပတွင် လုပ်ရသောအလုပ်များမှာ အလွန်အန္တရာယ်များလှသည်။ အဆောက်အဦ အပြင်ဘက် မျက်နှာပြင်ကို ဆေးသုတ်ခြင်း ပြတင်းပေါက်ဆင်ခြင်း၊ ကြွေပြား၊ မှန်စသည်တို့တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက် ဂွန်ဒိုလာ၊ Mast climber စသည်တို့ သုံးတတ်သည်။
Mast Climber နှင့် Gondola များသုံးလျှင် သတ်မှတ်ထားသော လူအရေအတွက်သာ ထိုပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် ရှိပါစေ။ အသက်ကယ်ကြိုး (life line) ကို လိုက်ပါသောလူဦးရေအလိုက် ထားပေးရမည်။ ဥပမာ - လူသုံးဦးလိုက်လျှင် အသက်ကယ်ကြိုး သုံးချောင်းဆင်ပေးထားရမည်။ အသက်ကယ်ကြိုးတစ်ချောင်းလျှင် လူတစ်ယောက်သာ သုံးရမည်။ ထို ဂွန်ဒိုလာ/mast climber ပေါ်တွင်ရှိနေသရွေ့ ကိုယ်သိုင်းကြိုး (safety harness) ကို fall arrestor နှင့် အသက်ကယ်ကြိုးတွင် ချိတ်ထားရမည်။ ဂွန်ဒိုလာ/mast climber ပေါ်မှ အဆောက်အဦပေါ်သို့ ခုန်ကူးခြင်း မည်သည့်အခါမှ မလုပ်ရ။
ဂွန်ဒိုလာ/mast climber အသုံးပြုမည့်သူများအား အသုံးပြုပုံကို သေသေချာချာ သင်ကြားပြသပေးထားရမည်။ ဂွန်ဒိုလာ/mast climber ကို တစ်လတစ်ခါ ပုံမှန်စစ်ဆေးရမည်။ အသုံးပြုသည့်အခါတိုင်း ဂွန်ဒိုလာ/mast climber ကို သေသေချာစစ်ဆေးရမည်။ အလုပ်ပြီးသည့်အခါ မည်သည့် လက်နက်ကိရိယာ၊ အမှိုက်သရိုက်မှ ဂွန်ဒိုလာ/mast climber ၏ working platform ပေါ်တွင် မထားခဲ့ရ။ အားလုံး သေချာစွာ သန့်ရှင်းခဲ့ရမည်။
၅။ Crane collapse at National Art Gallery site
နောက်တစ်ခုမှာ မြန်မာတို့စုဝေးရာ ပင်နင်ဆူလာပလာဇာနှင့် မလှမ်းမကမ်း၊ မြို့တော်ခမ်းမဘေး၊ National Art Gallery ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၌ ၃၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃ နေ့က ကရိန်းလဲပြိုမှုဖြစ်၏။ ၂ ယောက်သေပြီး ၃ ယောက် အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရသည်။
မိန်းကန်ထရိုက်တာမှာ Takanaka ဖြစ်၏။ ဖြစ်ပုံမှာ ကရိန်းနောက်တွင် ဆွဲထားသော counter balance weight ကွန်ကရစ်တုံးများ ပြုတ်ကျပြီး ငြမ်းစင်တချို့ပြိုကျခြင်းဖြစ်၏။ (အောင်မလေးဗျို့၊ ကရိန်းမှာဆွဲထားတဲ့ တချို့တုံးကြီးတွေဆို ၁ တန်၊ ၂ တန်လောက်လေးတဲ့ဟာကြီးတွေ။ တိုက်ရိုက်များပိလိုက်လို့ကတော့ ငြုပ်ဆုံထဲ ထည့်ထောင်းတာထက်ဆိုးလိမ့်မည်။ အရိုးအသားတောင်ရှာလို့ရမှာမဟုတ်။)
သည်ဟာကတော့ အကုသိုလ်ကံ အတုံးလိုက်ဝင်တာလို့ပဲ ပြောရတော့မည်။ ဘုမသိဘမသိ သေရခြင်းဖြစ်၏။ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်က ကောင်းကင်တွင် ပျံသွားသော ကျီးကန်းတစ်ကောင်။ အောက်က လွင့်ပျံတက်လာသော မီးလောင်နေသည့် ကောက်ရိုးကွင်း လည်ပင်းစွပ်ကာ သေခဲ့ရ၏။ ယခင်အတိတ်ဘ၀က နွားတစ်ကောင်ကို လည်ပင်း မီးကွင်းစွပ်ကာ သတ်ခဲ့သော ၀ဋ်ကြွေးဖြစ်၏။
သည်သတင်းကြားတော့ ကျွန်ုပ်လည်း မျက်လုံးပြူး၊ မျက်ဆန်ပြူးနှင့် ကရိန်းကန်ထရိုက်တာများကို ဒရောသောပါး ဖုံးဆက်ကာ သူတို့ ကရိန်းများကို လာစစ်ခိုင်းရသည်။ ကျွန်တော်တို့ဆိုဒ်၌ တာဝါကရိန်း သုံးစီးရှိ၏။ ၃၀၀ မျှသော အလုပ် သမားများမှာ ထိုတာဝါကရိန်းများအောက်၌ အလုပ်လုပ်နေကြသည်။ ပရောဂျက်အစပိုင်းက ကရိန်းမောင်းတံ (boom) မှ လူကြီးတစ်ဖက်စာလောက်ရှိသော အုပ်ဆောင်းနှင့်မီးသီးကြီး တစ်ခါပြုတ်ကျဖူးသည်။ ပြုတ်ကျသည့်နေရာနှင့် ၅ မီတာခန့် ဝေးသောနေရာတွင် အလုပ်သမား ၆ ယောက် ဖောင်ဝပ်ဆင်နေသည်။ သောက်ကျိုးနဲ၊ ကံကြီးသီပေလို့။ အဲဒီအုပ်စုပေါ်သာ ပြုတ်ကျလို့ကတော့ တစ်ယောက်အနည်းဆုံးပဲ။
မိတ်ဆွေများခင်ဗျား။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ရောက်လျှင် ပထမဆုံး ကရိန်းများကို ကြည့်ပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် သူတို့နှင့် ဝေးရာကိုရှားပါ။ သူတို့အောက်မှာ မဖြစ်မနေလုပ်ရမည်ဆိုလျှင် သတိဝီရိယနှင့် လုပ်ကြပါ။ ဘယ်အချိန်၊ ဘာဖြစ်မည် ကို မည်သူမှမသိ။ သတိဆိုတာ ပိုသည်မရှိ။
ကရိန်းများနှင့် ပစ္စည်းများ မ,နေစဉ် ထိုအောက်တွင် မည်သူမှ ရှိမနေပါစေနှင့်။ ပစ္စည်းမ,သည့်နေရာကို ၀င်းခတ် (cordorn off) ထားပါ။ ၀န်ချီလုပ်သားများမှ အပ မည်သူမှ အ၀င်မခံရ။ အချက်ပြသူ (signal man) က ၀ီစီတရွှီရွှီမှုတ်ကာ အချက်ပေးရန် လိုပါသည်။ ၀ီစီမှုတ်သံကြားလျှင် ဝေးရာသို့ ရှောင်ကြရှားကြရန် ကြိုတင် သတင်းပေးထားပါ။
အဲလေ၊ ပြောဘို့ တစ်ခုမေ့သွားတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ လလောက်က တစ်ခါဖြစ်သေးတယ်။ ကရိန်းကို ဆားဗစ်လုပ်ဖို့ တက်သွားတဲ့သူက ခါးမှာ ဂွတွေချိတ်သွားတယ်။ အဲဒီအထဲက ၃၆မမ ဂွကြီးတစ်ချောင်းပြုတ်ကျတာ ကံကောင်းလို့မသေ၊ သံချောင်းတို့အဖေ။ မြေကြီးပေါ်မှာ အမှိုက်သိမ်းနေတဲ့ ထိုင်းအလုပ်သမားတစ်ယောက် အနားကို ပြုတ်ကျတာ။ ဟိုငနဲလဲ ထိတ်ထိတ်ပြာပြာဖြစ်သွား။ မဖြစ်ဘဲ ခံနိုင်ရိုးလားဗျာ။ ခေါင်းပေါ်တည့်တည့်သာ ကျလို့ကတော့ . . . . ။
နေပါဦး။ အဲဒီလိုတွေဖြစ်ရအောင် ခင်ဗျားက အခန်းထဲ အိပ်ငိုက်နေလို့လား . . . . လို့ . . . . အပြစ်တင်မစောပါနှင့် ခင်ဗျာ။ အဆောက်အဦ ၃ ခု (တစ်ခုက ၉ ထပ်၊ တစ်ခုက ၇ ထပ်၊ နောက်တစ်ခုက ၈ ထပ်ထိပြီးသွားပြီ) မှာ လူ ၃၀၀ လောက် နေရာအနှံ့လုပ်နေတာ ဘယ့်နဲ့ လူတိုင်းကို မျက်စေ့ဒေါက်ထောက် ကြည့်နေနိုင်ပါမတုံးဗျာ။ မနက်ပိုင်း တစ်နာရီခွဲလောက် ဆိုဒ်ထဲပတ်လိုက်တာနဲ့ ပြန်လာရင် လျှာထွက်နေပြီ။
ကန်ထရိုက်တာ ၁၅ ခုမှာ သက်ဆိုင်ရာ so call safety တွေ ရှိပါ့။ ဒါပေမဲ့ဗျာ၊ ဥပဒေလွတ် ခမောက်အပြာဆောင်းပေး ထားတာကပဲ။ ဘယ်သူ safety အလုပ်လုပ်သလဲ။ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်လက်ထောက်နှစ်ယောက်ပဲ လျှောက်စစ်ရတာ ကလား။ ဟုတ်ပါဘူး။ အခြေအနေသိအောင် ပြောပြတာပါ။
၆။ Scaffolding collapses at Braddell Road worksite
၂ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၃ နေ့က တိုးပါးရိုးတွင် ငြမ်းစင်ပြိုကျမှုဖြစ်ခဲ့၏။ တစ်ယောက်မှ မသေသော်လည်း အလုပ်သမား ၇ ယောက် ဒဏ်ရာရသည်။ တစ်ယောက်မှာ အတော်ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံရသည်။
ဖြစ်ပုံမှာ ဒုတိယထပ်တွင် ဆင်ထားသော တွဲလောင်းဆွဲငြမ်းစင် suspended scaffolding ပြိုကျခြင်းဖြစ်၏။ အကြောင်းရင်းကို သေသေချာချာမသိရပါ။
အမြင့်တစ်နေရာတွင် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၌ ငြမ်းများကို အနည်းနှင့်အများ သုံးကြရသည်။ ငြမ်းအသုံးပြုရာ၌ အန္တရာယ်တစ်ခုမှာ ငြမ်းစင်ပြိုလဲမှုဖြစ်ပါသည်။ ငြမ်းစင်ထိုးခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းများ ရှိပါသည်။ ငြမ်းစင်ထိုးခြင်းအတွက် စင်ကာပူမှ ဥပဒေမှာ WORKPLACE SAFETY AND HEALTH (SCAFFOLDS) REGULATIONS 2011 ဖြစ်၏။
သက်ဆိုင်ရာ Singapore standard နှင့် Code of Practice များမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်၏။
Ø CP 14: 1996 Code of practice for scaffolds
Ø CP 20 : 1999 Code Of Practice For Suspended scaffolds
Ø SS 280: Part 1: 2006; Specification for metal scaffoldings, Part 1: Frame scaffoldings
Ø SS 280 : Part2: 2009; Specification For Metal scaffoldings, Part2: Modular scaffoldings
Ø SS 311: 2005 Specification for steel tubes and fittings used in tubular scaffolding
ငြမ်းဆင်ခြင်းကို အတည်ပြုထားသော ငြမ်းဆင်သည့် ကုမ္ပဏီကသာ ဆင်ရသည်။ ငြမ်းဆင်သူအားလုံးသည် ငြမ်းဆင်လက်မှတ် (Metal scaffold erector cert.) ရထားသူများ ဖြစ်ရမည်။ ငြမ်းဆင်ရာတွင် ငြမ်းဆင်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်သူ (Scaffold supervisor) ၏ အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှုဖြင့်သာ ငြမ်းဆင်ရမည်။
CP20 တွင် suspended scaffold အမျိုးအစားများကို Hinged suspended scaffold, Independent suspended scaffold, Multi-level suspended scaffold စသဖြင့် ဖြော်ပထားသည်။ မည်သည့် suspended scaffold ကိုမဆို ဒီဇိုင်းဆွဲ ထားသည့်အတိုင်းသာ တည်ဆောက်ရမည်။ ဒီဇိုင်းတွင် ခံနိုင်ဝန်အား (SWL - Safe Working Load)၊ ငြမ်းစင်ကိုဆွဲထားမည့် ကြိုးတင်းအား (rope tension)၊ ကြိုးကိုဖမ်းထားသည့်နေရာ (anchorage system), ကြမ်းခင်းနှင့် ဘောင် (decking and framing), လက်ရမ်းတန်းနှင့် ခြေကာပြားများ (guardrail and toeboard) စသည်တို့ကို တွက်ချက်ဖော်ပြထားသည်။
ထို့နောက် စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်ထုတ်ပေးသည်။
ဤစံနှုန်းများအတိုင်းသာ တိတိကျကျ လိုက်နာလုပ်ဆောင်ပါက ငြမ်းစင်ပြိုစရာအကြောင်းမရှိ။ ငြမ်းစင်ပြိုပြီဆိုတော့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးများ လုပ်မည်။ အကယ်၍ ဥပဒေတွင်ပြဌာန်းထားသည်တို့နှင့် ငြိစွန်းပါက ဒဏ်ငွေ နှစ်သောင်းထိ သို့မဟုတ် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး (ပြစ်မှုအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍) ချမှတ်နိုင်သည်။
အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်၊ ၂၀၁၃ ရက်နေ့က Hougang, Defu Lane 10 တွင် ခရော်လာကရိန်း (crawler crane) လဲပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထမင်းစားပြီးချိန်တွင် ဖြစ်တာဆိုတော့ ဆိုဒ်ထဲကို တစ်ယောက်မှ ပြန်မရောက်သေးဟု ထင်၏။ တစ်ယောက်မှ ဒဏ်ရာမရ။ (တော်သေးတာပေါ့။) ပြီးခဲ့သည့် တစ်ပတ်လောက်ကမှ City Hall တွင် ကရိန်း accident ဖြစ်ခဲ့ သေးသည်။ ယခု ထပ်ဖြစ်ပြန်သည်ဆိုတော့ ဒါ ပေါ့သေးသေးလေး တွက်လို့မရပါ။
ခွကျသည်မှာ ကရိန်းမောင်းသူများဖြစ်၏။ ကရိန်းမောင်းသူအတော်များများမှာ ၀ါရင့်၊ သမ္ဘာရင့်များ ဖြစ်၏။ ငါတို့ မောင်းလာတာ ကြာပြီ။ ဘာမှမဖြစ်ဘူး ဟု ခေါင်းမာသူများ ဖြစ်၏။ အောက်မှပုံများမှာ ကျွန်တော်တို့ဆိုဒ်မှ ပုံများဖြစ်သည်။
ပထမတစ်ဦးက out rigger ထုတ်စရာနေရာမရှိဘူး ဟု ဆင်ခြေကန်သည်။ နေရာမရှိရင် ရှိတဲ့နေရာမှာ သွားချ ဟု ဘုတောလိုက်မှ ထုတ်၏။ နောက်တစ်ဦးကလည်း out rigger ကို ဥပဒေလွတ်ရုံ ထုတ်ထားသည်။ မင်း၊ out rigger ကို အပြည့်မထုတ်ရင် အဲဒီ ဂျင်နရေတာကြီး ချခွင့်မပြုနိုင်ဘူး ဆိုတော့မှ ထုတ်၏။ ပထမပုံထဲက ကရိန်းသမား နောက်တစ်ခေါက် ဆိုဒ်ထဲလာတော့ သဘောပေါက်သွားပြီ။ ပြောစရာမလိုတော့။ အောက်ကပုံကို ကြည့်ပါ။
ဖြစ်ခါမှဖြစ်ရော့။ လုပ်လို့ရသရွေ့တော့ လုပ်ကြတာသာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ ဆိုဒ်သို့လာသည့် လော်ရီကရိန်း သမားတိုင်းလိုလို ဤအတိုင်းချည်းဖြစ်သည်။ ဟိုတလောက ပစ္စည်းလာချသည့် တစ်ယောက်လည်း သည်အတိုင်းဖြစ်သည်။ သူက ကွန်ကရိလောင်းရာတွင် ထည့်မြှုပ်သည့် (reinforced bar) steel wiremesh များ လာချခြင်းဖြစ်၏။ မင်း out rigger မထုတ်ရင် ခုချက်ချင်း ငါတို့ဆိုဒ်ထဲက ထွက်သွားပါ ဟု ဟောက်သော် အေးအေးသက်သာပြောလဲ ရပါတယ်ကွ ဆို၏။ မင်းတို့ ကောင်တွေက အေးအေးသက်သာနဲ့ တန်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူး ဆိုတော့မှ ငြိမ်သွားသည်။
ကရိန်းနှင့်ပစ္စည်းအတင်အချလုပ်လျှင် out rigger ကို အပြည့် (fully extend) ထုတ်ရမှန်း သူတို့သိသည်။ သို့သော် လုပ်လို့ရမလားလို့ စမ်းလုပ်ကြည့်တာ ဖြစ်၏။ သိလျက်သားနှင့် မလိုက်နာသော ထိုသူများကို အလွန်မုန်းလှသည်။ ထို့ကြောင့် နင်ပဲငဆပြောမိခြင်းဖြစ်၏။ မတော် ကိုယ်မသိခင် သူတို့လုပ်လိုက်လို့ တစ်ယောက်ယောက်သေပါပြီတဲ့။ ကိုယ်ပဲ ခေါင်းခံရှင်းရ မည်။ သည်တော့ ညှာလို့မဖြစ်။ လုပ်လို့မရဘူးလား။ မလုပ်နဲ့။ ငါတို့စည်းကမ်းမလိုက်နာဘူးလား။ အခုထွက်သွား။
၈။ Formwork collapse at Bishan
၁၀ ဇန္န၀ါရီ၊ ၂၀၁၄ နေ့က Bishan Street 13 တွင် formwork ပြိုကျမှုဖြစ်သည်။ ကန်ထရိုက်တာမှာ Lian Soon construction ဖြစ်၏။ Kuo Chuan Primary and Secondary school အားကစားရုံ၊ ဒုတိယထပ်ကို ကွန်ကရစ်လောင်းနေစဉ် ပြိုကျခြင်းဖြစ်သည်။ သတင်းအသေးစိတ်ကို မထုတ်ပြန်ပါ။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတစုံတရာမရှိဟု ယူဆရပါသည်။
ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၁၂ နေ့ကလည်း Bugis Downtown Line MRT တွင် ဖောင်ဝပ်ပြိုကျ၍ တရုတ်အလုပ်သမား နှစ်ယောက် သေပြီး ၈ ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေရာမှာ မြေအောက် ၄ မီတာ အနက်တွင် ဖြစ်၏။ ဖောင်ဝပ်ဆင်ပြီး ကွန်ကရိလောင်းနေစဉ် ပြီးလုပြီးခင် မနက် ၆ နာရီခွဲလောက်တွင် ကွန်ကရိယိုစိမ့်လာသည်။ သည်တော့ တရုတ်အလုပ်သမားများ ဆင်းကြည့်သည်။ ယိုသည့်နေရာကို ကြိုးစားဖာကြည့်သည်။ အလွန်အန္တရာယ်များမှန်း ၎င်းတို့ မသိသလော။ သိလျက်နှင့်လုပ်သလော။ မည်သူသိနိုင်ပါမည်နည်း။
ငြမ်းစင်ပြိုကျတော့ တစ်ယောက်က အတင်းတက်ပြေးလို့ လွတ်ခါနီး၊ အခြားအလုပ်သမားများအကူအညီဖြင့် အတင်း ဆွဲထုတ်သဖြင့် အသက်ဘေးမှ ချမ်းသာရာရခဲ့သည်။ ဟိုနှစ်ယောက်ကတော့ ပြိုကျသည့် ကွန်ကရိများအောက်တွင် ပိသည်။
စင်ကာပူမီးသတ် (Singapore Civil Defence Force) ရောက်လာတော့ ကွန်ကရိများမခဲအောင် ရေများထိုးသွင်း၊ လိုက်ရှာ။ ၇ နာရီလောက်ရှာတော့မှ အလုပ်သမားနှစ်ယောက်ကို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တစ်မီတာခန့်ခြား၍ ရှာတွေ့သည်။ ငြမ်းဆင်ထားသော ပိုက်များဖြင့် တံစို့ထိုးပြီးသား ဖြစ်နေပြီ။
သို့အတွက် အဓိကတာဝန်ရှိသူ ကန်ထရိုက်တာ Soletanche-Bachy and Koh Brothers ကို ဒဏ်ငွေ ၇ သောင်း တပ်ရိုက်ခဲ့၏။
ဖောင်ဝပ် (Formwork) ကို သမားရိုးကျဖောင်ဝပ် (conventional formwork) နှင့် ဆင်ပြီးသားဖောင်ဝပ် (system formwork) ဟု အကြမ်းဖျဉ်း နှစ်မျိုးခွဲနိုင်သည်။ System formwork တွင် table form, jump form, column form စသည်တို့ပါသည်။ ဖောင်ဝပ်ဆင်ခြင်းအတွက် ဥပဒေနှင့် စံနှုန်းများမှာ -
WSH (Construction) Regulations 2007 – Part IX Formwork Structures
SS580:2012 – Code of Practice for Formwork (ယခင် CP23) - တို့ဖြစ်၏။
သည်တွင်လည်း ဥပဒေက ပြောထားသည့်အတိုင်း၊ သတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းများက ညွှန်ပြထားသည့်အတိုင်း လိုက်နာလုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက ပြိုစရာမရှိပါ။ စာအုပ်ထဲကဟာ စာအုပ်ထဲမှာပဲထား။ ငါတို့စံနဲ့ငါတို့လုပ်မယ်ဆိုတော့ ပြိုသည်ပေါ့။ ဖောင်ဝပ်ယိုတာ ယိုပါစေလား။ ဘာကိစ္စ အသက်အသေခံ ဆင်းပြီး စွန့်စားရသတုံး။ သူရဲကောင်းလုပ်ချင်တော့ သေသည်ပေါ့။
ဖောင်ဝပ်ကို ဖောင်ဝပ်ဆူပါဗိုက်ဆာ၏ အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်သာ ဆင်ရသည်။ ဆင်ပြီးလျှင် ကွန်ကရိ မလောင်းမီ ဖောင်ဝပ်ဆူပါဗိုက်ဆာက သေသေချာချာ စစ်ဆေးပြီး ကွန်ကရိလောင်းရန် အန္တရာယ်ကင်းကြောင်း လက်မှတ် ထိုးရသည်။ သည်လိုပဲ ဖောင်ဝပ်ဖျက်တော့လည်း သတ်မှတ်ထားသော Safe Work Procedure များအတိုင်း ဖျက်ရသည်။
ကျွန်တော်တို့ဆိုဒ်တွင် ရှိုဖီ အမည်ရှိ ပြည်ကြီးတရုတ် ဖောင်ဝပ်ဆူပါဗိုက်ဆာ ရှိသည်။ ဆပ်ကန်ထရိုက်တာက Chan Rong Fen ဆိုသော တရုတ်ကုမ္ပဏီ၊ သူတို့ဟာသူတို့ ဆင်ချင်သလိုဆင်သည်။ တက်ချင်သလိုတက်သည်။ ဆင်းချင်သလို ဆင်းသည်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ အနှီ ငရဲသားများကို ဆိုရဆဲရနှင့် ကျွန်ုပ်မှာ အကုသိုလ်များလှ၏။ ရှိုဖီကို Formwork checklist အချိန်မီပေးဘို့ပြောတာ အခါ ၁၀၀ မကတော့။ တစ်ခါမှ မပေးစဖူး။ Formwork checklist မပေးသဖြင့်လည်း အနှီ သကောင့်သား ဖောင်ဝပ်ကို တစ်ခါမှမစစ်တာ သေချာလှသည်။ ကျွန်တော်တို့ကပဲ မနေနိုင်လို့သွားစစ်။ ကွန်ကရိ လောင်းနေတုံး အောက်တည့်တည့်မှ ထိုင်စောင့်ကာ ယိုမယိုကြည့်နေသည့် တရုတ်များတွေ့လျှင် မနိုင့်ရင်ကာ ဆဲဆိုလွှတ်ရ သည်။
သူဌေးချင်းက အဆင်ပြေနေတော့ ဆဲလဲမောင်ဆဲသာဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ် သူတို့ကို သတိပေးစာများ၊ ဖိုင်းများ ပို့ပေါင်း များလှပြီ။ ငနဲသားတို့က အပြုံးမပျက်။ အနို့ ဒဏ်ကြေးဆိုတာ ကျွန်ုပ်တိုက်ရိုက်ဖြတ်လို့ ရတာမဟုတ်။ ရုံးက သူတို့ကို ပေးစရာရှိသော ပိုက်ဆံများမှ ဖြတ်တာဖြစ်သည်။ သူတို့မဖြတ်တော့ ဟိုအကောင်တွေက ဘာဖြုံလိမ့်မတုံး။ ကျွန်ုပ်မှာသာ သောက်ရူးကြီးကို ဖြစ်လို့။ သည်တော့ ဖောင်ဝပ်များ မကြာခဏပြိုကျတာ ဘာဆန်းလိမ့်မတုံး။ ဘာမှ အထူးအဆန်းမဟုတ်ပါ။
၁၀ ရက်နေ့က ဘိရှန်းတွင်ပြိုသည်။ နောက်တစ်နေ့ ၁၁ ရက်နေ့ကျတော့ ရီရွှန်းတွင်ပြိုသည်။
၉။ Formwork collapse at Yishun
၁၁ ဇန္န၀ါရီ၊ ၂၀၁၄ နေ့က Yishun Industrial Street 1, SH Design & Build Pte Ltd's တွင် formwork ပြိုကျမှု ဖြစ်သည်။ မည်သည့်သတင်းထုတ်ပြန်မှုမှ မတွေ့ရပါ။ ထို့အတူ ၂၀၁၄၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက်နေ့က အလုပ်သမားနှစ်ဦး ဖောင်ဝပ် ပေါ်မှ ပြုတ်ကျ၍ တစ်ဦးသေ၊ တစ်ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ မည်သည့်သတင်းမှ မထွက်။ Table form ကို ၄ ထပ်မှ ၅ ထပ်သို့ သယ်ရန်ပြုလုပ်ရာ ၎င်းတို့နှစ်ဦး ဖောင်ဝပ်ပေါ်တက်သည်။ ထိုစဉ် ဖောင်ဝပ် အောက်သို့ လျှောကာပြုတ်ကျသဖြင့် သေခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
Table form ကို တစ်ထပ်မှ နောက်တစ်ထပ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကို flying လုပ်သည်ဟု ခေါ်သည်။ ထို table form ကို တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ရွှေ့ရန် ဘီးများပေါ်တင်ရသည်။ table form ဘီးပေါ်ရှိနေစဉ် အပေါ်သို့မည်သူမှ မတက်ရ။ အထက်ပါပုံမှာ ကျွန်တော်တို့ ဆိုဒ်မှ ပုံဖြစ်၏။ မကြာသေးမီကမှ ရိုက်ထားတာဖြစ်သည်။ သူတို့ကို supplier ကရော ကျွန်တော်ပါ ဖောင်ဝပ်ဆင်နည်း၊ ဖြုတ်နည်း၊ flying လုပ်နည်း အထပ်ထပ် သင်ပေးထားပြီး ဖြစ်၏။
သို့သော် ပြောတုန်းခဏဖြစ်၏။ နောက်ပြီး ဒုံရင်း ပြန်ပြန်ရောက်သွားသည်မှာ စိတ်ပျက်စရာကောင်းလှသည်။
၁၀။ GS Accident
နောက် အက်ဆီးဒင့်တစ်ခုကတော့ အတော်လေး အုတ်အော်သောင်းတင်း ဖြစ်သွားသည်။ ၂၂ ဇန္န၀ါရီ၊ ၂၀၁၄ နေ့က Fusionopolis Way, near Ayer Rajah Avenue ဆိုဒ်တွင် အသက် ၂၀ ကျော် ဘန်းဂလားအလုပ်သမားနှစ်ယောက် ၇ ထပ်မှ ပြုတ်ကျသေခြင်းဖြစ်၏။ မိန်းကန်ထရိုက်တာမှာ ကိုးရီးယားကုမ္ပဏီဖြစ်သော GS Engineering & Construction ဖြစ်သည်။
ဖြစ်ပုံမှာ ပစ္စည်းအတင်အချစင် (loading platform) ပေါ် လေမှုတ်စက် (air compressor) တင်ကာ တစ်ပြိုင်နက် မ,ရာ လေမှုတ်စက်လိမ့်ပြီး လျှောကျသည်ကို သေတွင်းလိုက်ရှာနေသော ကုလားလေးနှစ်ကောင်က အတင်းလိုက်ဆွဲသော ကြောင့် စက်ရောလူပါ လိမ့်ကျခြင်း ဖြစ်၏။ (အဲဒီ လေမှုတ်စက်က နင့်ယောက္ခပစ္စည်းမို့ အတင်းလိုက်ဆွဲရသလား ငနာရဲ့။)
အခင်းဖြစ်ပွားချိန်မှာ ထမင်းစားချိန် ၁၂ နာရီခွဲကျော်။ ဆိုတော့ နှစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ခုမှာ အခြားအချိန်များတွင် ကရိန်းကို အခြားသူများသုံးနေသောကြောင့် ထမင်းစားချိန်တွင် လုပ်ရတာ ဖြစ်မည်။ နောက်တစ်ခုမှာ သူများတွေ ထမင်းစား နားနေချိန်၊ ဘယ်သူမှမရှိတုံး ခိုးလုပ်တာဖြစ်မည်။ loading platform နှင့် air compressor ကို နှစ်ခါ မ,မ ချင်။ အချိန်ကုန်သည်။ လက်ဝင်သည်။ သည်တော့ နှစ်ခုပေါင်းကာ တစ်ပြိုင်နက်တည်း မသည်။ အနှီဆူပါဗိုက်ဆာ၏အကြံ မမိုက်ပါသလော။ မိုက်၏။ သေသည်ထိမိုက်၏။ (ဒီမှာ မိုက်တယ်ဆိုတာ ဟို ကောင်မလေးတွေ လှတာကို မိုက်တယ် လို့ ပြောတာမျိုး ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော့။)
ဘာပစ္စည်း မ,မ။ ဘယ်တော့မှ နှစ်ခုထပ် မ,မ ပါလေနှင့်။ အကယ်၍ ပစ္စည်းနှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက် မ,မည်ဆိုလျှင် ထိုနှစ်ခုကို (လင်နှင့်မယားကဲ့သို့ နှစ်ခုကိုတစ်ခုအလား) အလွန်သေချာစွာ ခိုင်မြဲအောင် တုပ်နှောင်ပါ။ ဖယိုဖရဲ ဖြစ်နေသော (loose items) များ (ဥပမာ - အုတ်များ၊ screw jeck base များ) ကို ကပ် (pallet) ပေါ်တင်ကာ မ,မည်ဆိုလျှင် cargo net, သံအုပ်ဆောင်းများဖြင့် သေချာစွာ ဖုံးအုပ်ပြီးမှ မ,ပါ။ ကောင်းတာကတော့ ကန် (waste bin) ထဲထည့်ကာ မ,ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘာပစ္စည်းဘဲမ,မ။ ဘယ်တော့မှ ထိုပစ္စည်းပေါ် တက်မလိုက်ပါလေနှင့်။ Loading platform ကို ဆင်တော့မည် ဆိုလျှင် ကြမ်းပြင်မှာချကာ ဦးစွာ ဆင်ရသည်။ နောက် ကြမ်းစွန်းမှာတပ်ပြီဆိုတော့ လူက အပြင်မှနေကာ jack များကို ကြပ်ရ တာဖြစ်၏။ တန်းလန်းဆွဲထားသော Loading platform ပေါ် ဘယ်တော့မှ မတက်ပါနှင့်။ ဟောသည် နှစ်ကောင်ကို နမူနာ ယူပါ။ Loading platform ပေါ် တက်ပြီဆိုလျှင် safety harness ၀တ်ပါ။ ချိတ် ချိတ်ပါ။
၆ - ၄ - ၂၀၁၄။ ည ၈း၃၅ နာရီ
Posted by အေးငြိမ်း at 8:36 PM